Pụrụ iche Labeling Machine Series Manufacturers & Suppliers - China Special Labeling Machine Series Factory
A na-arara igwe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ FK813 akpaka na ụdị aha kaadị niile. A na-etinye ihe nkiri ihe nkiri abụọ na-echebe ihe n’elu akwụkwọ plastik dị iche iche. Labelgba ọsọ aha ọsọ ọsọ, izi ezi dị elu, ihe nkiri ahụ enweghịkwa egosipụta, dị ka mgbochi mmiri akpa nhicha akpa, Wet na-ehichapụ na mmiri na-ehichapụ igbe aha, ịdebanye aha katọn, akara ngosi akara ntanetị, akara aha kaadiboodu, akara aha acrylic, nnukwu ihe ntanye ihe ntanye plastik, wdg. A na-ejikarị ya na ngwá electronic, ngwaike, plastik, chemical na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
FK Big Bucket Labeling Machine, Okwesiri maka ịkọ aha ma ọ bụ ihe nkiri na-ejide onwe ya na elu nke ihe dị iche iche, dịka akwụkwọ, folda, igbe, katọn, ihe egwuregwu, akpa, kaadị na ngwaahịa ndị ọzọ. Ngbanwe nke usoro ntinye aha nwere ike adabara maka ịkọ aha na ala. A na-etinye ya na ịdebanye aha dị larịị nke nnukwu ngwaahịa na akara nke ihe dị larịị nwere ọtụtụ nkọwa.
FK838 Automatic Plane Production Line Labeling Machine na Gantry Guzosie
FK838 igwe akụrụngwa akpaka nwere ike dakọtara na usoro mgbakọ iji kpọọ ngwaahịa ndị na-asọ asọ na elu elu na akụkụ ahụ gbagọrọ agbagọ iji ghọta aha njirimara na-enweghị ntanetị. Ọ bụrụ na ejikọtara ya na eriri na-ahụ maka nzuzo, ọ nwere ike ịkpọ ihe ndị na-asọ. Nkọwapụta zuru oke na-egosipụta njirimara dị mma nke ngwaahịa ma na-akwalite asọmpi. A na-eji ya na nkwakọ ngwaahịa, nri, ihe eji egwuri egwu, kemịkalụ kwa ụbọchị, eletrọniki, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.